I-Indawo yokuhlala nezidlo zakusasa e-Cece 350m ukuya ogwini. U-Diani 🇰🇪
Kwale County, i-Kenya
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Cissie
Indlu iyi-1bedroom, ifakwe yonke i-wifi, i-DStv, ugesi, amanzi kanye nokuhlanza konke kuhlangene. Ibhulakifesi/ukudla okuphekwe yimi (ikakhulukazi 🇰🇪 cuisine yaseKenya yokukunikeza umuzwa wokudla ohlukile ngesikhathi uhlala) kungalungiswa/ukulethwa kufakwe nge-oda ngamanani aphusile. Ukuhlobisa kwangaphakathi kugqugquzelwe ukukhula kwami eZanzibar ekuqaleni kweminyaka yama-90's ngokuthinta isitayela sefenisha yaseScandinavia. Eduze komgwaqo omkhulu we-diani beach, ibanga lokuhamba ukuya olwandle, izindawo zokudlela, isibhedlela, imakethe encane kanye nejimu.
Indlu enefenisha ephelele engu-1bedroom, 350metres ukuya ogwini, indawo yokuhlala ngaphandle kwendlu, indawo yokudlela enetafula/izihlalo ezengeziwe, umbhede owusayizi wendlovukazi egumbini lokulala, igumbi lokuhlala linombhede usofa womuntu owengeziwe, ikhishi kanye negumbi lokugezela. I-Wifi, i-Dstv, amandla, amanzi nokuhlanza konke kuhlangene.
Ukuphila ngobungane futhi kufinyeleleka ezindaweni zokudlela, isibhedlela, imakethe encane kanye nejimu okuyibanga lokuhamba.
Itholakala ocingweni/umbhalo kukho konke ukuhlala kwakho. Ngihlala eduze kwendlu ukuze ngikwazi nokuzifikela mathupha. Ngemva kokuhlolwa kuka-8pm umnakekeli uzokuhlola futhi ngizohlangana nawe ngosuku olulandelayo.